Lahatsary “Happy” Nampigadra Tanora Enina Tany Iran · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Mey 2014 3:59 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, English, Français, Deutsch, Português, 日本語, Español, English
Nandray ny valin'asany ny Iraniana Enina tamin'ny fiarahana tamin'ny fironana manerantany rehefa namokatra lahatsary ahitana fandihizana ny hira “Happy” nataon'i Pharrell Williams avy any Tehran ry zareo.
Amin'izao fotoana izao, efa navotsotra avokoa izy rehetra ankoatra ny iray rehefa nanambara ny manampahefana Iraniana fa nosamborina tamin'ny 20 Mey izy ireo.
Tao anatin'ny fanentanana Twitter #FreeHappyIranians ny mpiserasrea Iraniana no nameno siokam-pahatezerana sy fahadisoam-panantenana ny aterineto.
Noterena hiseho tao amin'ny fahitalavi-panjakana Iraniana nandritra vaovao hariva ilay tarika, niara-nipetraka, nanatrika ny lehiben'ny polisy ao Tehran, Hossein Sajedinia. Niaiky izy ireo fa nanaiky hiseho tao anaty clip rehefa nantsoin'olo-tsy fantatra (lahy sy vavy) .
Sheema Kalbasi ni-tweet:
Potkin Azarmehr ni-tweet:
35 yrs ago after an Islamic Revolution, happiness became a crime in a happy land with happy people 🙁 #iran #freehappyiranians